Sidee ayuu u Ku Bilaawday Cudurka Coronavirus ? -
HomeWararkaSidee ayuu u Ku Bilaawday Cudurka Coronavirus ?
Sidee ayuu u Ku Bilaawday Cudurka Coronavirus ?
March 21, 2020 F.G Wararka 0
Dhamaadkii sandkii tegey ee 2019 ayuu Dr Dr Li Wenliang, oo ka hawlgala xarunta xakamaynta cudurada faafa ee Gobolka Wuhan ee dalka Shiinaha wuxuu 7 ruux ku arkay calaamado Fayris isku mid ah, laakiin uu maleeyey Fayriskii Sars ee sanadkii 2003 Shiinaha ku faafay.
Dhakhaatiir saaxibadiis ah ayuu fariin uu Fayriska uga digayo Whatsapp ka ugu diray. Maalmo uun ka dib waxaa ilinka ku soo garaacay Booliska oo uga digay in uu joojiyo faafinta dacaayadaha been abuurka ee dadwaynaha lagu qalqal gelinayo, waxayna ka saxiixeen qiraal in hadii mar danbe uu warkaas faafiyo Maxkamad la keenayo, waxayna ku amreen in isaga iyo dhakaatiir kale oo saaxibadiis ah ay tirtiraan qoraalo ay baraha bulshada ku faafiyeen oo ay kaga digayaan fayriska cusub.
Madaxda Shiinaha in muddo ah ayey inkirsanaayeen Fayriska, waxayna isku dayayeen in ay yareeyaan halista la sheegayo. Laakiin 20 Janaayo ayey dawladu Shiinuhu qiratay in cudurku uu mid faafa yahay, xaalad degdeg ahna ku soo rogtay Gobolkii uu ka dilaacay.
Laakiin xiligaa talo faro way ka baxday oo Gobolkii uu cudurku ka dilaacay ee Wuhan ugu yaraan Shan malyan oo ruux ayaa ka baxay, ka hor intii aysan dawladu xirin, dadkiisana karantiilin.
Inkastoo ay Shiinuhu si la yaqaan oo karti leh u xakameeyeen Fayriska, haddana waxaa la isku raacsan yahay in haddii hogaanka Shiinuhu uu dhagaysan lahaa talooyinka khubarada sayniska iyo caafimaad ka in ay awoodi lahaayeen xakamaynta Fayriska CoronaVirus, maantana uusan halis intaa la eg dunida ku keeneen.
Daacadnimo waran, run sheeg, joogtayn xog maalinle ah oo ku saabsan Fayriska, qabashada intii ay tabartu tahay, jihaynta iyo tilmaam siinta dadwaynaha, horaysiinta iyo hawlgelinta khubarada aqoonta u leh sayniska iyo caafimaadka ayaa laga rabaa hogaanka dawlada, inteena kalana in aan ku garabsiino si aan uga badbaadnio Fayriskan dunida aafeeyey.
xigasho c/cabdi shakur